ချစ်ကြည်အေး: သူ့အကြိုက် (သို့မဟုတ်) ကျမ ချက် မိ....(အပိုင်း ၁)
မေဇင် Tue Mar 02, 05:42:00 PM GMT+8
အာ...ပညာတွေ ရတယ်...း)) ၀က်သား ကို သူကလဲ သိပ်ကြိုက်တာမို့...ဒီ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ထဲမှာပဲ ၀က်သားစုံချက်နည်း ရလိုက်တယ်...။ အခုတော့ အစာအိမ်ကို ဘယ်က စဖောက်ရမလဲ မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်း)))
Nge Naing Tue Mar 02, 05:52:00 PM GMT+8
၀က်သားကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ မချစ်ကြည်အေးတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက ခပ်၀၀ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မလည်း အရင်က အသားမှာ ၀က်သားတခုပဲ ကြိုက်တယ်။ အခုတော့ မစားတာ ၄ နှစ်ရှိပြီ။ အစ်မအမျိုးသားကတော့ အချက်အပြုတ်ကောင်းတဲ့ ဇနီးကို ရထားတာ တော်တော် ကုသိုလ်ထူးတာပဲ။ ကျွန်မ အမျိုးသားကတော့ ကျွန်မ ချက်တာ အရသာမရှိလို့ ဆိုပြီးသူ့ဖါသာသူပဲ ချက်စားတယ်။
9-9 Tue Mar 02, 06:07:00 PM GMT+8
rose of sharon Tue Mar 02, 06:17:00 PM GMT+8
ဝက်သားချက်နည်းတွေမှတ်သားသွားတယ်... ယောင်္ကျားချက်ကျွေးဘို့မဟုတ်... ကိုယ့်ဟာကိုယ်ချက်စားဘို့
ကိုဇော် Tue Mar 02, 07:03:00 PM GMT+8
အမတော်ထားရာကနေ မရီးပါ ပြောင်းတော်ချင်တယ်ဗျို့...
ဒီလို အချက်အပြုတ်ကောင်းတဲ့ အမ တစ်ယောက်များ လိုချင်တယ်။
ကျနော်က အကြီးဆုံးဆိုတော့ မခံစားရဖူးဘူး။
ဒီလိုမျိုး “ အစာအိမ် ဖောက်မယ် ” ဆိုရင် ပြုံးပြီးတော့ ခံလိုက်ဦးမယ် အမရေ.။
ချစ်ကြည်အေး Tue Mar 02, 07:07:00 PM GMT+8
ညီမ မေဇင် ၊မငယ်၊ နိူင်းနိူင်း နဲ့ ရို့စ် ...ရေ ဒါအကုန် မဟုတ်သေးဘူး... ဝက်ပုန်းရည်တို့၊ ဝက်သား သရက်သီးအစိမ်းသနပ်ချက် တို့၊ ဝက်သားစင်းကောကို ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်း ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်ဥလေးတလုံး၊ ကော်မှုန့်လေးနဲ့နယ် ပြီးမှ အရွယ်တော် လုံးပြီး ခဏထား၊ ခရမ်းချဉ်သီး ဆီသပ်ပြီး အနှစ်လေး နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းလေး ထက်ခြမ်းခွဲထည့်တဲ့ ဝက်သားလုံးဟင်း လည်း ရှိသေး၊ စာ သိတ်ရှည်သွားမှာ စိုးလို့ မထည့်ဖြစ်တာ...:))
အစာအိမ် ဖောက်နည်းလား သင်ပေးမယ် ညီမ မေဇင်ရေ...၊
မငယ်ရေ...ခုတလော နဲနဲ ပြန်လျော့နေတယ်၊ သိတ် မဝချင်လို့၊
နိူင်း ဒီလိုပဲညီမရေ တို့ အမျိုးသမီးတွေက ချစ်သူ စားကောင်းတယ်ဆို ကျေနပ်နေတာပဲ၊
ရိုစ့်ရေ...အားပါး...ကြိုက်သွားပြီ ပြတ်သားလွန်းလို့... :)
MrDBA Tue Mar 02, 07:24:00 PM GMT+8
ကျွန်တော်လဲ ဝက်သားနီချက် တယ်ပိုင်တယ်ဗျ။ ဟင်းချင်းလဲစားကြရအောင်ဗျာ ဟေးဟေး
Anonymous Tue Mar 02, 07:39:00 PM GMT+8
ဟွင့် ဝက် ဝက် နဲ့ ခေါင်းတောင် ကြိမ်းတယ် ဟိဟိ
မီးလဲ ဝက်သားကြိုက်တယ် ဗျိုးးးးးးး ဟားဟားးးးးးးး
mks Tue Mar 02, 09:21:00 PM GMT+8
ကျနော် လည်း ၀က်မြင် ရင် ခေါင်းကိုက်သူပါ မချစ်။ အဲ .. ခြေထောက်လည်း ကိုက်ပါတယ်.. ၀က်ခြေထောက် စွပ်ပြုတ် နည်းလေး တင်ပါဦး။
Thant Tue Mar 02, 09:51:00 PM GMT+8
ဒီနေ့ရော...ဘာဟင်းဝက်သားချက်လဲ အစ်မ.... :P
အင်ကြင်းသန့် Tue Mar 02, 10:00:00 PM GMT+8
ယောင်္ကျား တယောက်ကို ကြိုက်ရင် သူ့ရဲ့ အစာအိမ် လမ်းကြောင်းက စဖောက် ရသတဲ့...ဟုတ်လားမမ...ဒါဆိုရင် ညီမလေးကတော့ ဓါးနဲ့ဖောက်မှပဲ ရတော့မယ်... :D
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Tue Mar 02, 10:10:00 PM GMT+8
မေဓာဝီ Tue Mar 02, 10:46:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်အေးရဲ့ "သူ"က ၀က်မလွတ်မြို့စားကြီးများလား။ :)
မယ်ကိုး Tue Mar 02, 11:16:00 PM GMT+8
:P အပိုင်း နှစ်မျှော်နေမယ်နော် မမ =)
ဇွန်မိုးစက် Wed Mar 03, 12:21:00 AM GMT+8
ဇွန့်ကို အိမ်လည်ဖိတ်ပါအုံး။ အစ်မလက်ရာ စားကြည့်ချင်လို့ အဟဲ... :D
P.S. အစ်မတို့လည်း ဘုန်းကြီကျောင်းမှာတွေ့တာပဲပေါ့။ ဟိုအစ်မနဲ့အစ်ကိုလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တွေ့တာတဲ့။ (သိလား ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ..ဟဲ) နောက် KZMS နဲ့ MTTH လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တွေ့တာဆိုပဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဖူးစာတွေပေါ့နော်။း)
nu-san Wed Mar 03, 01:18:00 AM GMT+8
အမရေ.. အချိန်အားတုန်းလေး Blog လည်ရင်း ဒီကိုရောက်လာတာ.. ၀က်သားပန်းကန်မြင်ပြီး စားချင်လိုက်တာ.. ဒီမှာလေ.. ၀က်သားဆိုရင် အခေါက်တွေကို ဖယ်ပြီးမှ ရောင်းတယ်.. အဲဒီလို အဆီအသားတွဲနေတာမျိုးရှိဘူး.. ၀က်သားချက်နည်းမျိုးစုံဆိုပြီး ပို့စ်တစ်ခုတင်ပါလားအမ.. :D ချက်နည်းတွေ တစ်စုတစ်စည်းထဲဖြစ်သွားအောင်လေ.. :)
Shinlay Wed Mar 03, 01:30:00 AM GMT+8
သုံးထပ်သား ၀က်သနီချက်လေး ငတ်ငတ်နဲ့ငေးသွားပါတယ်။
Anonymous Wed Mar 03, 02:51:00 AM GMT+8
can you tell us how to do "the gyar(sugar) see that". I am so horrible in cooking but would like to try some of your ideas... I usually needabit more detail instructions but i will give itashot..thanks.
PhoEniX Thu Aug 20, 08:18:00 PM GMT+8
1kg of pork is ok to use 100 more of cooking oil (u can tip off excess oil later) heat it up and add sugar 1.5 tbl spoon into oil in aluminium pot (better than stainless steel pot). Once sugar turn dark brown color, add pork picese and stir for3min occasionally. Then add water and other ingredients . turn down to low heat after5min boiling. And cook it until as soft as you like. (Follow main writer's for ingridents)
မောင်မိုး Wed Mar 03, 11:02:00 AM GMT+8
သြော်..ချစ်ကိုကြီးရယ်...အခုမှ မိန်းမပိုးနည်းဗျူဟာတွေ သိရတော့တယ်။
Vista Wed Mar 03, 11:32:00 AM GMT+8
" ဟင်းအိုးမွှေနေတဲ့ ကျမကို တွေ့စကတည်းက သူ့ရင်တွေ လှုပ်ကနဲ ဖြစ်သွားခဲ့ရတာ " ဟင်းအိုးနဲ့ ချစ်ရသူတွဲတွေ့ လိုက်တာကိုး ဟိဟိ...
မောင်ဘကြိုင် Wed Mar 03, 12:01:00 PM GMT+8
ချဉ်ပေါင်တွေရမယ် ချဉ်ပေါင်တွေရမယ်ဗျို့း)
သက်ဝေ Wed Mar 03, 01:53:00 PM GMT+8
ဝက်သားကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ချက်စားပြီး ဝိတ်လျှော့နေတယ်ပေါ့လေ...
ကိုယ်ကတော့ ဝက်သား ကြိုက်ဖူး...
တခြားဟာ ချက်ကျွေးပါ...း))
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် Wed Mar 03, 08:15:00 PM GMT+8
အရောက်နောက်ကျလို့ ကိုယ်တိုင် အပြစ်ပြန်တင်နေမိတယ်..။
စာလေးတွေက သိပ်ကောင်းတာပဲ ဝက်သားတုံးကြီးကြည့်ပြီးတော့ ဗိုက်တော်တော်ဆာလာတယ်..။း)
ကျနော်လည်း ကြုံတုန်း ဟင်းတစ်ခွက်လောက် ဝင်ချက်မယ်လေ..း)
ဝက်သားကို ခပ်ပါးပါးလှီး၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဆား၊ ဟင်းချိုမှုန့် နည်းနည်းနဲ့ နယ်ပြီး နှပ်ထား..၊ မုံညှင်းချဉ်အစပ် (ရှမ်းချဉ်) ကိုလည်း ခပ်သေးသေး ဖြစ်အောင် လှီး၊ ပြီးရင် ကြက်သွန်နီး ၆ စိပ်လှီး၊ ဂျင်း အမြှောင်းသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင်လှီး၊ ပြီးရင် ဆီနည်းနည်းနဲ့ ဝက်သားအရင်ကြော် နူးလောက်ပြီထင်ရင် ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်နီထည့်ကြော်၊ အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုပ်သီးစိမ်းပါ ထည့်ကြော်၊ ပြီးရင် မုံညှင်းချဉ်တွေ ထည့်ကြော် မွှေးလာရင်တော့ စားလို့ရပြီဗျို့ မုံညှင်းချဉ်ကောင်းရင် ဆားတို့ အချိုမှုန့်တို့ ထပ်မထည့်ရဘူးဗျ..။ အဲ့ဒါက အခြောက်ကြော် ပဲဟင်းလေးနဲ့ လိုက်တယ်..။
အပေါ်ကအဆင့်ရောက်မှ ရေတစ်ဇလုံလောက် ထည့်ပြီး ပွက်အောင်တည်လိုက်တော့ ဝက်သားမုံညှင်းချဉ်ချက် ဖြစ်သွားရော.. ဆီတဝေ့ဝေ့နဲ့ နီနီရဲရဲ စားချင်စရာ.. ဒါလည်း ကောင်းတာပဲ အရည်လေးက ချဉ်ချဉ်လေး၊ ဒါကိုမှ ပွက်နေချိန် ကော်မှုန့်လေး ဖျော်ထည့်လိုက်တော့ ကော်ရည်လေးနဲ့ဗျာ.. အလွန်ကောင်း..။
လျှာကိုလည်ရော.. ကြုံရင် ချက်ကျွေးကြည့်ပါ အစ်မ ချစ်ချစ်ကြီး တရှူးရှူးတရှဲရှဲနဲ့ ဖြစ်သွားစေရမယ်..။ အတည်ပေါက်နဲ့ ဆရာလုပ်ပြီး လာပြောနေတယ်.. အစ်မက အရည်ကျိုသောက်ထားတယ်ဆိုတော့ ဒါလည်း သိပြီးသား ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..း)
ကျနော်ကတော့ အဲ့ဒီ ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့တင် တစ်ဘဝလုံး ပုံအပ်လိုက်တာပဲ..း)) ခုတော့ အဲ့ဒီ ဟင်းတစ်ခွက်ပါ ချက်တတ်သွားပြီ.. (မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့) ဟဲဟဲ..း)
ဘာရယ်မဟုတ် စာဖတ်ပြီး အလိုလို ခင်သွားလို့ ကော်မန့်ရှည်ကြီး ပေးသွားတယ်.. လင့်လည်း ချိတ်လိုက်ပါမယ်..
ချစ်ကြည်အေး Wed Mar 03, 09:01:00 PM GMT+8
ကဒီဘီရေ...ကြာသလားလို့ ဝက်သားနီချက် ကဒီဘီ့ ဘလော့ဂ်ပေါ် အရင် တင်လိုက်စမ်းဘာ ဘာ...:)
ဝက်ကလေး အမ လူဝက် မချက်တတ်ပါ ...:)
အကို မင်းခွန်စိုး ဝက်ခြေထောက် စွပ်ပြုတ်နည်း တင်ချင်တာ ခုထိ ဝက်ကို လက် နဲ့ ခြေထောက် မခွဲတတ်သေးလို့ ဟီဟိ...:)
သန့်ရေ...ကနေ့ ဝက်သားဟင်း မဟုတ် ...ဝက်ကလီဇာ...(စိုးမြတ်သူဇာ နှင့် အမျိုး...ဟုတ်ဖူးနော်)
ညီမအင်ကြင်း ဓါးကြီးနဲ့ ဗိုက်ဖောက်မှာ ဝက်ကိုလားဟင် ...:)
မာမီကျောက် ကလည်း အဒူက ဖောက်ရဲမဒုံး...မာမီကျောက် ဗိုက်ကြီးထဲက သရဲတွေ မင်စာတွေ ထွက်လာမှ ဒွတ်ခ....:)
မေဓါဝီရေ...ဝက်မလွတ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေး ရေးခဲ့ဖူးတာ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်:)
အိုခေ ညီမလေး မယ်ကိုးရေ...ပါတ်တူး မကြာစေရဘူးနော်....:)
ခုတော့ ပြောစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ ညီမဇွန်...:)
ညီမ နုစံရေ အမက ဟင်းချက်တုန်း ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပျင်းတာ...အဲဒါကြောင့် ဟင်းချက်နည်း မရေးတာ...သက်ဝေ တယောက် လက်စွမ်းပြချင်လှချည့် ဆိုရင်တော့ တင်ဖြစ်မှာပေါ့လေ...:)
မြည်းသွားဘူးလား ရှင်လေးရဲ့ ...:)
Anonymous: ဆီနဲနဲ နဲ့ ဘရောင်း ရှုးဂါး(Brown Sugar) ကြော်သလိုမျိုး လုပ်တာကို သကြားဆီသတ်တယ် ခေါ်ပါတယ်ရှင်...ကျမလည်း ကြုံတဲ့ အခါ အသေးစိတ် ရေးပါအုံးမယ် ...:)
မောင်မိုး ဖလိုင်းပြီး လာခဲ့လေ...ချက်တော့ ကျွေးလို့ မဖြစ်ဘူး ထင်တာပဲဟ..:)
ဟုတ်ပ ဗစ်စ်ရေ...ဟင်းအိုးထဲက ဟင်းကို ရင်ခုန်ခဲ့တာများလား မသိ...:)
မောင်လေး ဘကြိုင်...သေချာတယ် ရွာအပြန် ချဉ်ပေါင် ဝင်ခူးအုံးမှာ...ဈေးတက်ကုန်ပြီ ကြားတယ်...:)
ဝက်သား မကြိုက်ရင် သုံးထပ်သားကလေး ပြောင်းချက်ကျွေးမပေါ့ ချစ်သက်ဝေ ကလေးရယ်...:)
ကိုရင်နော်ရေ...သေချာတာပေါ့ဗျာ ဝက်သားမုန်ညှင်းချဉ် ချက်ဖူးတယ် ဒါပေမဲ့ အကြော်လို အခြောက်ချက်တာ၊ ရေထည့်ပြီး ကော်ရည်လေးနဲ့ မချက်ဖူးသေးဘူးရှင်၊ စမ်းချက်ကြည့်ပါအုံးမယ် စားကောင်းမဲ့ ပုံပဲ ရှလွတ်...:)
Anonymous Wed Mar 03, 11:13:00 PM GMT+8
ကိုရင်နော် ချက်တာ သိတယ်။ မအယ်တို့ ချက်စားတတ်တယ်။
၀က်သားနီချက် ခြောက်ခြောက်လေးကို ပါးပါးလှီးပြီး ကောက်ညှင်းနဲ့ တရုတ်နံနံနဲ့ ငရုတ်ကောင်းနဲ့ ကောက်ညှင်းထမင်းကြော် လုပ်စားကြည့်ပါအုန်း ကောင်းမှ ကောင်း။
ကောက်ညှင်းကို ထမင်းချက်သလိုပဲ ချက်ထားရတယ်။ ထမင်းအစား ကောက်ညှင်းနဲ့ပေါ့။
နှစ်ကူးရင် ခဏခဏ စားရတယ် လွမ်းတာ။
မြသွေးနီ Thu Mar 04, 12:18:00 PM GMT+8
Moe Cho Thinn Thu Mar 04, 02:05:00 PM GMT+8
ခေါင်းစဉ်က ကျမချက်မိ လို့ တပ်ထားတော့ ကျမချက်မိ အပြစ်ရှိ၏ ဆိုသလို တလွဲတွေများ ချက်သလား အောက်မေ့တာ..(ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီး ထင်မိတယ်) သူကဖြင့် ကျမချက်မိ အချစ်ရှိသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ရေးထားတာကိုး။
မမကို နမူနာ ဟင်းလေးမြင်ပြီး အမတော်ပါရစေ လို့..။ ချိုသင်းလဲ ၀က်ကြိုက်သူပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ တခါမှ ဒီလိုပုံလေး မထွက်ဘူး၊ မဲတူးနေတာချည့်..။
ချစ်ကြည်အေး Thu Mar 04, 10:01:00 PM GMT+8
မမအယ်...ဟင်းအသစ် တခွက်အတွက် ကျေးဇူး...ချက်ကြည့်အုံးမယ်နော်၊ မြသွေး ဝအောင်သာ စားသွားနော် ညီမ၊ ချိုသင်းရေ...အပြစ်ရှိက မကြာမီ လာမည် မျှော်...အမ တော်လို့ရတယ် အဲဒီကို အရင်ခေါ်လေ...လာချက်ကျွေးမယ်...သိလား...:))
khin oo may Thu Mar 04, 11:58:00 PM GMT+8
မြင်ရတာ မိုးချိုသင်းအတွက်ရင်လေးလိုက်တာ ကလေးမ စိတ်ထိန်းနိုင်ပါ့မလားမသိ..
Anonymous Fri Mar 05, 02:31:00 AM GMT+8
မိန်းမရ ကံကောင်းသည်ဟုသာ မှတ်ချက်ချမည်။
ဘာကူတေးကို အရမ်းကြိုက်ပါသည်။ အီကြာကွေးထည့်စားလျှင် ပို၍ အရသာရှိလှသည်။
ဓါတ်ပုံထဲက ၀က်သားတော့ လက်ရှောင်သွားသည်။ ၀က်ဆိုလျှင် အဆီလုံးးးးဝမစားသောကြောင့်ဖြစ်၏
အပြုံးပန်း Fri Mar 05, 06:41:00 AM GMT+8
အချိုချက်နည်းလေး စမ်းကြည့်အုံးမယ်၊ တခါမှ မချက်ဖူးသေးဘူး၊
ကိုချစ်ဖေ Sat Mar 06, 06:34:00 PM GMT+8
ဒါမျိူးချက်လို့ကတော့ ၀က်သားကို ၀က်
~ဏီလင်းညို~ Sun Mar 07, 03:07:00 PM GMT+8
နောက်ကျနေလို့ ပန်းကန်မဆေးရရင်တောင် ကံကောင်း...ဟွင်းးးးးးး